Tun Tun's Photo Diary: Mandalay Mobile Food Vendors
Mandalay Mobile Food Vendors
One thing I like about Mandalay is that even thought it becomes suchabig city, the culture of Mandalay is still maintained. Like those mobile food vendors selling delicious traditional foods door to door.
Burmese traditional food are relatively cheap and very tasty.
I can imagine this isavery tough job. They have to carry heavy load around to town and shout their available food names to get people attention. They will very happy to meet customer like me and my family because our house havealot of people and we used to eatalot. So that their load become lighter, sold out earlier and can go home earlier.
This time, I just eatenaheavy meal and too full to tryalot of food. But I still manged to eat that small bowl of NanGyi Toke (Rice noodle salad). Don't underestimated what she sells, I was shocked byavariety of food available eg, different types of salad (rice, noodle, tofu, papaya) and fish noodle soup (arr pu shar pu). All are packed in this wooden tray.
I have tried to lift her wooden tray and it was very heavy. She put it on her head and walk around the town onadaily basis.
at 9/23/2011 07:19:00 PM
တောင်ငူသား September 23, 2011 at 9:24 PM
ခိုတောင်မုန့်တီ ကြားဖူးကတည်းက စိတ်ဝင်စားလို့ 2009 မန္တလေးရောက်တုန်းက ဈေးချိုမှာ သွားရှာတယ်။ အရှာပဲ မတတ်လို့လား မသိဘူး။ တစ်သည်ပဲ တွေ့တယ်။ စားကြည့်တယ်။ တော်တော်ကောင်းတယ်။ အခုလဲ ခိုတောင်မုန့်တီ ထင်တာ။
Tun Tun September 23, 2011 at 9:35 PM
အခုပုံထဲက ဟာက ခိုတောင် မုန်.တီမဟုတ်ဘူး ထင်တယ်။ ရိုးရိုးမုန်.တီဖြစ်ဖို.များတယ်။ ဒါပေမယ့် မန္တလေးမှာ အခုထိ ခိုတောင်မုန်.တီသည်တွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ ခိုတောင်မုန်.တီက မွေးပြီး ပိုစားလို.ကောင်းတယ်။
Anonymous September 24, 2011 at 8:35 AM
အရင်တုန်းက ခိုတောင်မုန့် တီက ခေါင်းရွက်သည် များလို့ဆိုင်နေရာအတည်တကျမရှိပါ.. အခုတော့ မသိတော့ ပါဘူး .... ကြိုက်လွန်းလို့တခါစားရင် အနဲဆုံး ၂ ပွဲ ပဲ .....
T T Sweet September 25, 2011 at 3:56 AM
ပုံလေးတွေ သိပ်ကောင်းတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာတွေချည်းပဲ။ နိူ့ထမင်းသည်ကော မတွေ့ခဲ့ဘူးလားဗျို့။
Nokia N8 Camera Test #3
James Bond Island Tour #1
Weekend cooking #7 (Marlar Hin/မာလာဟင်း)
Wedding Gala Dinner
Burmese Spicy & Sour Pancake